विद्युतीय प्रविधिमा तरकारी खेती - Vegetable farmig in electronic technology -
Vegetable farmig in electronic technology
कुस्मा : कुस्मा नगरपालिका ३ आम्बोटमा पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका लालबहादुर हरिजनले यो वर्ष ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर नमुना अर्गानिक फार्म चलाएका हरिजनले गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । उनको बारीका टनेलमा बाह्रैमास गोलभेंडा फल्छ । मौसम अनुसारका तरकारी, काँक्रा, घिरौंला, बोडी, सिमी, खुर्सानी, साग, काउलीलगायत फलिरहेको हुन्छ । फार्ममा उनले माछापालेका छन्, केरा लगाएका छन् अनि कुखुरा पनि पालेका छन्।
गोलभेंडाको एउटै बोटबाट २० किलोसम्म उत्पादन हुने गरेको सगर्वले बताए । ‘नयाँँ प्रविधि प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्दो रहेछ’, कृषि व्यवसायी हरिजनले भने । उनले पर्वतमै पहिलोपटक विद्युतीय प्रणालीबाट तरकारी उत्पादन गर्ने प्रविधि ‘हाइड्रोपोनिक’ भित्याएका हुन् । यो प्रविधिमा बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्व पानीमा मिलाएर सिँचाइ गरिन्छ । हरिजनले दुईवटा फलामे स्ट्यान्डको सहारामा ३ मिटर लम्बाइ, ३ इन्च मोटाइका प्लास्टिक पाइपमा पानी भरेर प्लास्टिक ड्रम र सोलार प्यानलको सहयोगमा यस्तो प्रविधिको खेती गरेका हुन् ।
एउटा स्ट्यान्डमा परीक्षण सफल भएपछि हरिजनलगत्तै करिब दुई रोपनी जमिनमा यस्तै स्ट्यान्ड बढाउने सोचमा छन् । सात तलाको स्ट्यान्डको दुईतर्फ तरकारी रोप्न सकिने भएकाले सामान्यभन्दा सात गुणा बढी उत्पादन लिन सकिने उनले बताए । थोरै जमिन हुने र बजारमा करेसाबारी नहुनेका लागि यो प्रविधि तरकारी उत्पादनका लागि प्रभावकारी हुने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । ‘विकसित मुलुकमा यो प्रविधि धेरै पहिलादेखि व्यावसायिक बनेको छ’, पर्वतका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले भने, ‘हामीकहाँ भर्खर परीक्षण हुँदै छ । करेसाबारी नहुनेले छतमा तरकारी लगाउन यो प्रविधिको खेती उत्तम हुन्छ ।’
करिब डेढ मिटर उचाइको स्ट्यान्डमा दुवैतर्फ ३–३ वटा पीभीसी पाइप अड्याएर ३० इन्चको फरकमा पारेको प्वालमा प्लास्टिक कपको पिँध चिरेर तरकारीको बिरुवा रोपिन्छ । सोलारमा जडित सानो मोटरले ड्रममा खाद्यतत्व मि िश्रत पानी पाइपमार्फत बिरुवाको फेदसम्म पुर्‍याउँछ । बढी भएको पानी प्रत्येक बिरुवामा घुम्दै ड्रममै फर्किन्छ । दैनिक दुई घन्टा पर्ने सूर्यको किरणका कारण सोलारले पानीलाई बिरुवासम्म पठाउँदै बढी भएको पानी ड्रममै पठाउने सिस्टम बनाइएको हुन्छ ।
हरिजनको फार्ममा उत्पादित तरकारी सदरमुकाम कुस्मा बजार, डिमुवा, आम्बोट, गिज्यान र छिमेकी जिल्ला कास्कीको पोखरामा समेत बिक्री हुने गरेको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गको छेवैमा रहेको उक्त फार्ममा उत्पादित कृषीजन्य वस्तु ढुवानीमा कुनै समस्या छैन । उनको फार्मलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । फार्ममा चक्रीय प्रणालीमा तरकारी लगाउने गरिएको छ ।
काठमाडौं : उपत्यका प्रवेशको लाइफलाइन मुग्लिन-नारायणगढ सडक विस्तारको काम निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि चौथो पटक समय थप्नुपर्ने भएको छ। यो सडक विस्तारको काम हाल ७१ प्रतिशत मात्रै पूरा भएकाले अझै एक पटक सयम थप्नुपर्ने भएको हो। आगामी फेब्रुअरीमा चौथो पटक समय थपेर बाँकी काम गराउने तयारी सडक विभागले गरिरहेको छ। साढे दुई वर्षभित्रै विस्तारको काम पूरा गर्न ३३ महिना अगाडि सम्झौता भएको थियो। सडक निर्माणको ठेक्का लागेका दुई महिनामै (२०७२ वैशाखमा) गएको भूकम्प, सोही वर्षमा भएको नाकाबन्दी, निर्माण सामग्रीको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, प्रतिकूल मौसमलगायत कारण ...
नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा देशकै ठूलो र अत्याधुनिक अक्सिजन ग्यास प्लान्ट सोमबारदेखि संचालनमा आएको छ । प्लान्टबाट दैनिक ४७ लिटर क्षमताका एक हजार सिलिण्डर अक्सिजन, १२ सय लिटर नाईट्रोजन र जिरो एयर ग्यास उत्पादन भइरहेको बताइएको छ । एच. ओ. अक्सिजन ईन्डस्ट्रिज प्रा.लिले संचालनमा ल्याएको करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरिएको हो । प्लान्ट संचालनमा आएसँगै नारायणघाटदेखि पश्चिम क्षेत्रमा सहज र सुलभ ढंगले अक्सिजन तथा नाईट्रोजन ग्यास उपलब्ध हुने संचालकको भनाइ छ । जनसंख्याको बढ्दो चाप, बिरामीहरुको वृद्धि, उद्योग विस्तार, अस्पताल आदीको अध्ययन गरेर सुलभ तरिकाले ...
शेयर बजारसँगै कारोबार रकम पनि ओरालो
माघ ९ – शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार झण्डै ८ अंकले घटेको छ । अन्य बाहेकका सवै परिसूचक घटेपछि नेप्से मंगलबार ७ दशमलव ७६ विन्दुले घटेर १३ सय ९४ विन्दुको छेउमा आइपुगेको हो । मंगलबार सवैभन्दा धेरै बीमा समुह ८४ भन्दा धेरै अंकले घटेको छ । त्यसैगरि होटल समुह ५२, जलविद्युत झण्डै ३३, बैकिङ्ग ४, विकास बैक साढे ५ अंकले घटेको हो । अन्य समुह भने शुन्य दशमलव १२ अंकले बढेको छ । सोमबारभन्दा ७ करोड कम अर्थात २९ करोड भन्दा केही बढीको कारोबार भएको दिन मंगलबार ...
छ महिनामा ५९ अर्ब राजश्व संकलन
बीरगञ्ज – बिरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पछिल्लो ६ महिनामा तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिएका सामानबाट रु ५९ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख १२ हजार राजश्व संकलन गरेको छ। इन्धन र सवारी साधनबाट मात्र रु २९ अर्ब ७४ करोड ३१ लाख ४० हजार राजश्व संकलन गरेको बीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले कुल राजश्वको आधाभन्दा बढी इन्धन र नयाँ सवारी साधनबाट उठाएको छ । कार्यालयले ६ महिनामा मात्रै भारतबाट नेपाल ...
करोडौं खर्चेका सडक गुणस्तरहीन
इलाम – इलाममा २८ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माणाधीन २ महŒवपूर्ण सडकको काम ‘गुणस्तरीहीन’ भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ठूलो रकम खर्चेका सडकको काममा व्यापक लापरबाही गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। १९.०२३ किलोमिटरको फिक्कल–गुप्ती–नयाँबजार तथा इलाम नगरपालिका–दुधाङ–सोयाङ–नयाँबजारका बेग्लाबेग्लै दुई सडकको काममा लापर्बाही भइरहेको जनप्रतिनिधिको अनुुगमन टोलीले जनाएको हो । दुवै सडकमा स्टिमेटअनुसार काम नभएको, स्टिमेटमा भएअनुसार मापदण्ड पूरा नगरी सामग्री प्रयोग गरिरहेको, तोकिएको स्थानभन्दा जताततै खनेको र काम गरिनसक्दै सडक भत्किन थालेको उनीहरूले बताएका छन्। सूर्याेदय नगरपालिकाको फिक्कलदेखि माइजोगमाई गाउँपालिकाको नयाँबजार जोड्ने निर्माणाधीन फिक्कल–गुप्ती–नयाँबजार सडकमा ...